Suuraalee Afriikaa keessaa: Onkololeessa 27-Sadaasa 2 2017 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraalee Afriikaa keessaa: Onkololeessa 27-Sadaasa 2 2017
3 Sadaasa 2017
Filannoo suuraalee babbareedoo Afriikaa fi lammiilee Afriikaa ardiiwwan biroo keessaa dabalatee, kan torban kanaa.
Madda suuraa, Reuters
Konkolaataana Vols Vaagan 'Biitl' jedhamuun beekamtu iddoowwan baayyeetti hin mul'attu. Suuraa Rooyitarsiin gaafa Jimaataa maxxanfameen, namichi tokko konkolaataa isaanii kan bara 1977 kanarra taa'anii suuraa ka'an. Jabinaa fi rakasa tahuusaa guddoo jajaniiru.
Gaaf tokko tokko gargaarsa xiqqoo barbaadda taha. Mucaan kun qormaata Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Kibooroo, Naayiroobitti qoramuun dura kadhachaa jira.
Madda suuraa, AFP
Keenyaa iddoowwan garagaraatti filannoon irra deebii qalbii namoota hedduu qabatee ture. Wiixata dabarsine namoonni kunneen Kisuumuutti waan tahaa jiru hordofuuf TV ilaalaa turan.
Gaafa Kamisaa ammoo, arstistiin tokko fakkii Maangaa jedhamu magaalaa guddoo Libiyaa, Tiripoolitti kaasaa turte. Gumiin namootaa fakkii akkasii kaasuu jaalatan kan jalqabe ALA 1970ta keessa, Saan Diyeegootti.
Biyya Masriitti ammoo, namoonni kumaatamaan lakka'aman kilaba biyyasaanii kana tahe Al Ahiliin ennaa leenji'u daawwachuuf dirree galan. Kilabni isaanii kunis xumura Chaampiyoonaa Liigii Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Morokootti imalu. Haatahu malee, deeggartoonni kunniin osoo leenjicha hin ilaalin dura haqamee, otoo waa hin argin deebi'an.
Madda suuraa, EPA
Ayivoorii Koostitti, gaafa Wiixataa, dubartiin mala aadaatiin kokonaata irraa zayita baafti. Zayinni kokonaatarraa bahu, waa hedduuf tajaajila. Akka saamunaafi akka boba'aattillee oola. Mootummaan biyyattis, ALA 2020tti oomisha isaa gara toonii 600,000 guddisuuf karoorfateera.
Kun waan nama bohaarsu miti jechuu dandeessa. Dorgomtoonni Liibiyaa kunniin garuu guyyaa Sambata Duraa isaanii fiigicha gufachiisaa km4 akkasii fiiguun dabarsuuf filatan. Kunis shiboo jala ciisanii darbuu ofkeessaa hammata.
Madda suuraa, Google
Haala faallaa ta'een, namoonni bidiruurraa kunneen dorgommii marsaa 3ffaa Clipper Round The World Yacht Race jedhamu kanarratti yeroo gaarii waan dabarsaa jiran fakkaatu. Magaalaa Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon irraa gaafa Kibxataa ka'an. Karaarrattis dambaliin buubbee makate haga meetira 24 ol dheeratu isaan mudachuu danda'a.
Ijoolleen kutaa biyyaa Kaasaay, Rippablika Demokraatawaa Koongoo keessaa kunneen, jijjigaa gamoo kana keessatti taphachaa jiru. Naannoon kun waldhabdee barootaaf ture kanaan guddoo miidhamte.
Madda suuraa, PA
Dhumarrattis, magaalaa guddoo Rwaandaa Kigaaliitti, taphataan kirikeet Ingiliiz duraanii Mikaa'eel Voogaanii fi taphtaan Afrikaa Kibbaa duraanii Herschelle Gibbs gaafa Sambata Duraa taphatan.
Suuraaleen AFP, EPA, PA fi Reuters irraa argaman
Addunyaarra lakkoofsi namoota Covid'n du'anii miiliyoona sadii dabre
Ertiraan loltootashee Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun yeroo duraatif deebii kennite
'Maatiin adeemsa kanaan dhugaan Haacaaluu ni baha jedhee hin yaadu' - Sisaay Hundeessaa
16 Ebla 2021
'Taateen tibbana Chaaginiitti mudate yaaddoo nutti uumeera'- jiraattota
15 Ebla 2021
Namootni 43 qarqara galaana Jabuutiitti dhuman 'baqattoota Oromooti'
Guyyaa yaadannoo gootota Oromootti eenyufaatu yaadatama?
Magaalaa Naqamteetti boombii darbatameen lubbuun namaa dabre
13 Ebla 2021
Ji'i Ramadaanaa maaliif adda ta'e, Musliimonni akkamiin dabarsu?
Masrii fi Sudaan waamicha Itoophiyaan dhiyeessiteef fudhachuu didan
12 Ebla 2021
Kitaabni qorannoo 'Saddoo Gadaafi Mirgoota Dubartootaa' jedhu eebbifame
Viidiyoo, Ilma Mootii Fiiliip, Duukiin Edinbiraa eenyu turan?, Turtii 8,56
9 Ebla 2021
Barataan qabxii olaanaa fide 'maal akkan baradhu wallaale' jedha
Taatoon biyya Gaanaa suuraa qullaa maxxansiteef hidhaa buute
YouTube tajaajilaa Wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa uggure
'Baaroo malee Addi Bilisummaa Oromoo dhalachuu hin danda'u ture'
Shamarreen qormaata kutaa 12ffaa baranaatiin qabxii olaanaa galmeessiste eenyu?
'Mudannoo jireenyaa kootu itti cichee akkan qoramu na dirqamsiise'
Sa'aatiin kirkira lafaatiin hojii dhaabe, kirkira lafaa biraatiin hojjachuu eegale